မေးခွန်းလေး တစ်ခုလောက်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဖြေကြည့်ပါ။ | မာသင်
နယ်ပယ် တစ်ခု ကို Professional ကျကျ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတာကောင်းလား
နယ်ပယ် အားလုံး ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ် လုပ်တတ်အောင် ကြိုးစားတာကောင်းလား။
” ဘဲ ဆိုတာ ..
ခုန်တော့လဲ ရှဉ့် လောက်မခုန်နိုင်ဘူး။
ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် အကုန်လုပ်တတ်တယ်။
ဘယ်နယ်ပယ်မှာမှ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် Professional ကျကျမလုပ်တတ်ဘူး။”
ဘဲ လို နယ်ပယ် အားလုံး သိတာကောင်းလား?
နယ်ပယ်တစ်ခု ကိုပဲ Professional ကျကျကြိုးစားတာကောင်းလား?
ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်း စိတ်ကြိုက် မန့် ခဲ့ပါ။